Manangona Orinasa Fanontam-pirinty ve ireo orinasam-pandraharahana fiara Eoropeana
Rehefa mandinika lalindalina kokoa amin'ireo tanàna kely any Eoropa sy ireo toerana manerana ny lalan-dàlana ireo mpizahatany noho ny fitetezan'ny fitaterana an-dalamby, dia lasa liana kokoa koa ny manofa fiara mba hahatongavana any amin'ireny toerana ireny, indrindra raha miaraka amin'ny fianakaviana na namana izy ireo.
Raha manomana fitsangatsanganana izay manomboka sy mifarana ao amin'io tanàna io ihany ianao, fanofana fiara dia fanehoan-kevitra tsotra. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny fikarohana ny tahan'ny farafaharatsiny , mamaky ny fiaranao ary mandray azy rehefa tonga ianao.
Inona anefa no mitranga raha manidina any amin'ny tanàna iray eoropeanina ianao ary miala amin'ny trano hafa?
Eo afovoan-tany ny fiaramanidina fiaramanidina Eoropeana
Indray mandeha, ireo orinasam-panofana fiara Eoropeana sambatra dia nahafahan'ireo mpanjifany nanamboatra fomba iray fiara tsy dia nandoa vola. Ankoatra ny tsy fisian'ny faritra manokana, dia tsy misy intsony ny andro. Ireo orinasa mpanao fanatanjahantena fiara Eoropeana dia nanaiky ny saram-pikam-bola an-tapitrisany, ka nahatonga ny vidin'ny fiara ho lafo.
Manao fikarohana mba hamonjena vola amin'ny fananana fiara mpitety trano iray
Na izany aza, tsy mitovy ny saram-panangom-bola rehetra. Afaka manangom-bola foana ianao amin'ny fomba iray fiantohana fiara any Eorôpa raha maka fotoana hanaovana fikarohana ianao. Ity misy ohatra iray:
Nifidy fiara miditra an-tsokosoko aho fa maro ny orinasan-tsolika Eoropeana manolotra, Ford Mondeo. Mipetraka ny olona dimy ary manana fitaovam-pandikan-tanana (mahazatra any Eorôpa satria mampitombo ny orinasan-tsolika) sy ny toetr'andro. Nalaiko ny daty 25 aogositra 2012 ka hatramin'ny 9 septambra 2012 - tapa-bolana sy iray andro.
Nifidy ny seranam-piaramanidin'i Frankfurt aho, Alemaina, ho an'ny toerana fisavana, sy ny seranam-piaramanidina Fiumicino any Roma (fantatra any Etazonia amin'ny seranam-piaramanidina Leonardo da Vinci) ho an'ny toerana mialokaloka. Ankoatra ny marika voatondro, ny teny nindramina rehetra dia ho an'ny kilaometatra tsy misy fetra sy ny fandoavana amin'ny fisotrosana. Ny fiantohana ny fiatrehana ny fahasimbana amin'ny fahasimbana sy ny safidy hafa dia tsy tafiditra.
Mahaliana ny valiny.
Auto Europe dia nanonona ny tahan'ny $ 1,133.28, anisan'izany ny $ 409.71. Auto Europe dia mandoa onitra isan'andro ho an'ny mpamily fanampiny.
I Europcar dia nitanisa ny $ 1,353.20 ho an'ny VW Passat Variant, ny akaiky indrindra azoko aty amin'ny Mondeo. Tsy vitako ny mamaritra hoe ohatrinona io vola io ny fiatoana, satria ny Europcar dia tsy nametraka ny fiampangany. Ity takelaka fampindramana ity dia nahitana 4,500 kilaometatra (2,796 kilaometatra).
Hertz nanatsonga tahan'ny $ 1,174.46. Izany dia $ 491.65 (475 Euros) no fandoavam-bola. Hertz koa dia toa manana fetran-tsasatra amin'ny karazana sasany, satria ny andininy dia midika hoe "kilometatra maromaro" fa tsy kilaometatra tsy voafetra.
Ny Expedia dia nanome teny iray ho an'ny $ 1.022.65 $ ho an'ny loka Hertz. Nisy fiampangana ny $ 491.64 ary ny fandoavam-bidy $ 163.28 dia tafiditra ao anatin'io totaliny io.
Sixt dia nitanisa $ 1 257.96 ho an'ny VW Passat Variant. Amin'izany, $ 59 ny "làlana iray."
Orbitz dia tsy manonona fepetra ho an'ny fiara latsaky ny roa herinandro.
Ny vidin'ny fahasamihafana eo amin'ny Europcar, izay nitanisa ny taha ambony indrindra, ary ny Expedia, izay nitanisa ny tahan'ny ambany indrindra, dia $ 330.55. Eo am-pitrandrahana gazy telo eo amin'ny vidin'ny Eoropeana ankehitriny. Mazava àry fa mandoa vola hanaovana fikarohana izy.
Soso-kevitra momba ny saran-dalana Eoropeana
Ny solika solika dia mitaky latsaky ny vidin'ny litera any Eoropa noho ny gazoline, ary fiara mandeha amin'ny alàlan'ny fiara mifono vy mitondra fiara tsara, ka mendrika ny fotoana hikarakaranao ny safidin'ny fiara amin'ny fiara solosaina .
Ny tranonkala fiofanana fiara dia mandrisika sy manonitra ny vidin'ny vidin'ny fisavana. Ilainao ny manamarina boaty iray milaza zavatra toy izao, "Te-hividy amin'ny counter" aho mba handoavam-bola. Ny fandoavam-bola amin'ny alim-bolana dia mitaky vola bebe kokoa, saingy tsy voatery hidirana ianao mandra-pandraisanao ny fiaranao, ary ny karatra fiasanao dia tsy hovaliana raha tsy efa manana ny fanalahidin'ny fiara ianao.
Raha azo atao, manofa fiara fitaterana an-tariby. Tsy dia lafo ny hofaina. Ankoatra izany, misy biraon'ny fiara misy saram-piantsoana sasany milaza fa manana fiara mitondra fiara maimaim-poana, fa ny tena izy dia mety ho hafa tanteraka. Mitadiava namana miaraka amin'ny fiara fitaterana an-tariby ary mampiasà fitaovam-pandrosoana alohan'ny diavinao. Ny vola azonao dia ho mendrika ny fotoana fanao.
Maka vola bebe kokoa ny fisotroan-drivotra ao amin'ny seranana sy ny fako, fa atolory kosa ny fandefasana ora fiasan'ny fiara. Raha manofa ny fiaran-dalanao ianao ary mamoy izany amin'ny andro iray amin'ny herinandro, dia jereo ny vidin'ny toeram-piasana ao afovoan-tanàna (matetika eo akaikin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby). Azonao atao ny manangona 10 ka hatramin'ny 15 isan-jato amin'ny hofananao raha afaka mifidy ny fiaranao amin'ny seranam-piaramanidina ianao.
Raha manofa fiara ianao mandritra ny 21 andro na lava, dia eritrereto ny manofa fiara avy amin'ny iray amin'ireo mpivarotra fiara any Eoropa. Miankina amin'ny toerana tianao haka sy handao ny fiaranao, afaka mamonjy vola kely ianao.
Aiza no hakana ny fiaranao mandritra ny dianao
Ahoana no hividianana fiara rehefa mpianatra ianao eo ambanin'ny 25 taona?
Fomba tsotra hampihenana ny fandaniana fiara amin'ny fiara
Mitadiava fifanarahana fiara tsara indrindra
Avelao hanomboka amin'ny Disney World sy Disneyland ny fahatsiarovana
Seven Mountain Seven Magic dia ny Coaster-Crazy Foiben'i Kalifornia
Facts vaovao any Nouvelle Zélande: toerana, mponina, Etc.
Mianara ny dia ataonao amin'ny Rail amin'ny Europe
The 9 Best Sanitary Steamers San Antonio
Fomba hanapahana fahazavana ho an'i Gresy ho an'ny lehilahy
5 Zavatra Manan-tantara Ao Avaratra, Florida
Top 12 trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny any Belize
London's Biggest Shopping Mall any Westfield any London
Torohevitra momba ny fiarovana ny horohorontany: inona no tokony hatao mandritra ny horohorontany
9 Top Paharganj Hotels sy Hostels amin'ny Budget rehetra
The Guanella passage Colorado: The Complete guide